avo lenta avo lenta cnc lathe ny BT fitaovana holder China Manufacturer
Home > Products > Tool Holders > BT Fitaovana tompona MAS403 > avo lenta avo lenta cnc lathe ny BT fitaovana holder
1. Fitsipika ankapobeny: araka ny Soisa.
2. Vahao ny kofehy ao amin'ny Front of Shank. Ny sinton'ny fepetra dia ± 0.005mm.
3. Famolavolana notendrena amin'ny faran'ny shank: fifandanjana tsaratsara kokoa, faktiora avo lenta kokoa, mety amin'ny fizotran'ny haingam-pandeha. 4. Ny fitsaboana kryogne : Ampitomboy ny hamafin'ny tavy, ny mari-pahaizana HRC50-53.
Ny fametrahana ny mari-pahaizana: Fintino ny tetiarana + fitaovana amin'ny fitaovana famolavolana + ny endriky ny sisin-doko = 0.01 → MOQ sy ny volany. Ny teny fanolorana dia T / T sy Western Union, isika dia manohana ny fandoavam-bola Escrow amin'ny filaminana samirery mba hamonjena ny saram-pidirana ho an'ireo mpividy.
1.Hafiditra any Etazonia, Alemana, Polonina, Rosia sns
2.11 taona no mamokatra traikefa
3. mpamatsy fitaovana famindran-tanana
4.Dia mandeha haingana ny fotoana
Azontsika atao ihany koa ny manome fitaovana hafa mifandraika amin'izany, toy ny fiarovan-doha, ny fametahana fitaovana, ny toeram-pivarotana velona, ​​ny basy, ny masinina, sns.
Ireo CNC dia manana loharano marefo F1
SISHUI ​​TELI TOOL MANUFACTURING CO., LTD dia hita ao amin'ny SISHUI ​​Economic Develop Zone. Ny vokatra azo dia azo sokajina ho karazany telo: ny voalohany dia fitaovan'ny Tooling isan-karazany ho an'ny CNC Machine Tools, anisan'izany ny fitaovana fanamiana maotera, lohataon-jiro, sifotra vy na fametahana kofehy manify; Ary ny faharoa dia fitsipika hafa milina Accessories fitaovana, toy ny samy hafa rehetra Live Foibe, fandavahana Chucks, etc .;
Cnc Parts Bt Tool Holder High Quality Cnc Parts High Hold Tool Holder Cnc Parts Fmb Tool Holder CNC Parts Hsk Tool Holder Cnc Sk Tool Holders CNC Lathe Tool Holder Cnc Parts Collet
High Hold Tool Holder